सामसुले ग्यालक्सी एस and र एस ge एजको १२128 जीबी संस्करण निकाल्दछ Androidsis
हाम्रो ब्लगमा हामी गत केही हप्तादेखि विभिन्न कारणका लागि सामसु .को बारेमा कुरा गर्दैछौं। ती मध्ये एउटा पुनर्संरचना हो जुन कम्पनीले बजारमा बढी नाफा कमाउनको लागि गरिरहेको छ। यसको उद्देश्य ठूलो संख्यामा मोडेलहरू छुटकारा पाउनको लागि हो जुन एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा हुन्छन् र यसले कोरियनलाई सब भन्दा राम्रो परिणाम वा सबैभन्दा ठूलो कुख्यातता प्राप्त गर्न अनुमति दिदैन। यद्यपि कम्तिमा पनि अहिलेसम्म यी नयाँ प्रस्तावहरूले उनीहरूको मोबाइल टर्मिनलहरूको उच्च श्रेणी मान्नेलाई असर गर्ने छैनन्, यस केसमा। सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 र ग्यालक्सी S6 एज.
अन्तमा, कम्तिमा सैमसंगले लिइरहेको आन्दोलनलाई ध्यानमा राख्दै, चीजहरू अर्को बाटोमा गएको देखिन्छ। नडराउनुहोस्, स्यामसंग फ्यानहरू, यो त्यस्तो नराम्रो समाचार होइन। र ती मानिसहरू जसले पहिले नै ग्यालक्सीको अन्तिम उच्च-अन्त श्रृंखलाको असफलताको प्रशंसा गरिरहेका थिए, म तपाईंलाई जाने र मनाउने कारणहरू दिन गइरहेको छैन। यो केहि बजारमा उच्च क्षमताको संस्करणलाई हटाउने मात्र हो। त्यो हो, सामसु Galaxy ग्यालक्सी एस and र ग्यालक्सी एस6एजको उनीहरूसँग छैन १२128 जीबी विकल्प GB२ जीबी र GB 32 जीबी पूरक गर्न।
एउटा पूर्व घोषित निर्णय: १२128 जीबी हटाउनुहोस्
यद्यपि यो समाचार एक भन्दा बढि अचम्ममा लिन सक्दछ, चाहेकोले सामसु Samsungले यस्तै चालको पूर्व-घोषणा गरेको देख्यो। वास्तवमा, धेरै जसो युरोपेली बजारमा हामीसँग कहिले पनि मोडलको १२128 जीबी संस्करण हुँदैन सैमसंग ग्यालेक्सी S6। अझ बढी, यसको प्रस्तुतीकरणको साथ, केवल GB२ जीबी र GB 32 जीबी प्रस्तावहरू आइपुगे, सबैभन्दा बढि बिक्री प्राप्त गर्नेहरू। अहिले सम्म, जब जानकारी आधिकारिक बनाइएको छ, धेरैले मोबाइल टर्मिनल को अभाव पनि याद गरेका थिएनन्। यसको मतलब यो हो कि यस अवस्थामा कोरियालीले मात्र गल्ती गरेन तर यसको नाफा बढाउँदै लागत घटाउन सफल भएको छ।
को १२128 जीबी संस्करण मोबाइल टर्मिनलहरूको पूरै श्रृंखला को सब भन्दा महँगो फोन गर्न को लागी यो इच्छा प्रतिक्रिया। यद्यपि, यदि केहि वर्ष अघि उपभोक्ता कहिलेकाँही मार्केटिंग रणनीतिहरूले मूर्ख बनाएको थियो जसले स indicated्केत गर्दछ कि यदि तपाईंको मोडेल महँगो थियो भने, यो उत्तम थियो, अब चीजहरू परिवर्तन भएका छन्। ग्राहक बढ्ता बौद्धिक भएको छ र कम मानिसहरूले एमपीको संख्याको लागि मोबाइल फोन छनौट गरे जस्तै क्यामेराले कम र कम प्रयोगकर्ताहरू ठूलो भण्डारण क्षमता भएकोमा बढी तिर्न इच्छुक छन्। विशेष गरी यदि तिनीहरूलाई थाँहा हुन्छ कि तिनीहरूले यसको प्रयोग गर्दैनन् र क्लाउडमा खाली स्थान सबै विकल्पहरू उपयोग गर्न सक्षम हुन उत्तम विकल्प हो।
विशेष रूपमा, मलाई लाग्छ यो सम्झन लायक छ कि प्रयोगकर्ताहरूको उच्च क्षमता भण्डारण संस्करणको सन्दर्भमा कडा आलोचना मध्ये एक हो। यो कसरी सम्भव छ कि टर्मिनलको संस्करणहरू बीच १€० भन्दा बढीको भिन्नता छ? सत्य यो हो कि कुनै पनि विशेषज्ञले जवाफको व्याख्या गर्न सकेको छैन बाहेक कम्पनीहरूले अधिक क्षमताको साथ ती संस्करणहरूमा लाभ अधिकतम बनाउन खोज्छन्। १२ 150 जीबी फोन बेच्न यो धेरै नै लाभदायक हुन्छ किनभने यसले रिपोर्ट गर्ने फाइदा अधिक हुन्छ किनकि खर्चको दाम त्यति नै उकालो हुँदैन। तर त्यो लाभदायकता, एक स्मार्ट उपभोक्ताको साथ, काम गरेको देखिदैन। अलविदा सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 १२128 जीबी हामीले तपाईलाई कहिले देखेका छैनौं!
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » सामसु्गले ग्यालक्सी एस and र एस ge एजको १२128 जीबी संस्करण भर्ता छ
"वास्तवमा, धेरै जसो युरोपेली बजारमा हामीसंग सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस models मोडेलको १२128 जीबी संस्करण कहिले पनि आएको छैन।" ठीक छ, म अंग्रेजीमा सुनको GB२ जीबी किनाराको बारेमा जानकारी मागे र क्लर्कले मलाई भनेको भनेको "म मात्र हो। १२6 जीबी बाँकी छ। अन्तमा मैले सामान्य धुलो नीलो GB२ जीबी लिएँ, किनकि सानो वक्रताका लागि € १ .० को अतिरिक्त लागत यसको लायक पनि छैन ... मँ मल्लोर्का हुँ, हामी अझै युरोप बाहिर छौ, हे। जे भए पनि, यदि तपाइँ अंग्रेजी अदालतको पृष्ठमा जानुहुन्छ तिनीहरू बिक्रीको लागि र स्टकमा छन्, र म कसम खान्छु कि मैले उनीहरूलाई यस हप्ता मिडिया मार्केटमा पनि देखें। जे भए पनि, S32 यसको मूल्य हुँदैन। सामung्गले हार्डवेयर बेच्छ, तर एप्पलले जस्तो अनुभव गर्दैन। म S128 को बारे मा माफी चाहन्छु, धेरै। म एक पावर बैंकसँग जोडिएको छु, संस्करण .32.१.१ ले लग थप्छ, र र्याम प्रबन्धनको समस्या जारी छ ... खराब प्रयोग गरिएको हार्डवेयर। सामसु forका लागि इयर फ्लिप।
बर्षौं पहिले म आईफोनले भनेको भनेको, सीमित सुविधाहरू, मेमोरी सीमितताहरू र केही धेरै महँगो विकल्पहरू, छोटो ब्याट्री जीवन र गैर-हटाउन योग्य, फोनहरू निजीकृत गर्न असम्भव, नल सेटिंग्स, साना स्क्रिनहरू ... आदि जस्ता सबैबाट भागेर गएँ।
त्यसैले सामसुungमा धेरै गौरवशाली वर्ष पछि र धेरै खुशी भएपछि, म आफूलाई अप्रिय परिस्थितिमा पाउँदछु जस्तो लाग्छ म आफूबाट भागेको सबै कुरामा फर्किन्छु।
तर चिन्ता नलिनुहोस् ... त्यो हुन गइरहेको छैन।
होंडाले एन्ड्रोइड ओटोको साथ पहिलो कारको घोषणा गर्‍यो